ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်း - ဗိသုကာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာဘူခါရက် - Constanta ပြည်ထဲရေးအိမ်သူအိမ်သား - Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစတူဒီယို, ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်နာ, စီးပွားရေး, ဒီဇိုင်း, စျေးနှုန်းများ
တစ်ခုကအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုဦးချင်းစီကို client များအတွက်ထူးခြားသောတစ်ဦးအယူအဆထုံးစံကိုကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါကြောင့်သင်အစုစုအတွက်စတိုင်ဒီဇိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လျှင်သင်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်, လူတစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်နှင့် ငါတို့သည်သင်တို့ဧကန်အမှန်အပြည့်အဝကိုသင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖော်ပြလိမ့်မည်ဘို့ဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုထုံးစံဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း - ကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုတစ်ဦးထက်ပိုသေးစိတျဆှေးနှေးဘို့သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အစည်းအဝေးတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတိုဆုံးအချိန်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိရန်စီစဉ်ဖို့လိုလားကြောင်းမေးလ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်အဆောက်အဦပေးပို့ပါ။
စီမံကိန်းအတွက် 3D လေလံချိန်ညှိခြင်းနှင့်ချိန်ညှိတစ်ခုချင်းစီဧရိယာနှင့်အထူးသဖြင့်စတိုင် decorating နေကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီအခန်း၏ဦးတည်ရာကိုသက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်ကိုပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးတွင်ကျနော်တို့အသိုင်းအဝုိင်းသာယာအဆင်ပြေမှုများရဲ့ style ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်စာချုပ်အတိုင်းအတာကနဦးပုံကြမ်းစစ်ဆေးနေအသစ်တစ်ခုစံချိန်ဆွဲဘို့စီစဉ်ပေးခံရဖို့တည်နေရာသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက် subdivision ပြောင်းလဲမှုများရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပရောဂျက်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်ညာဘက်ထုတ်ကုန်အထူးသဖြင့်လျောက်ပတ်စတိုင်လ်ကို select ရာမှများစွာသောကတ်တလောက်လေ့လာနေ, ဝီရိယစိုက်အလုပ်များစွာကိုနာရီလိုအပ်ပြီးမဟုတ်အနည်းဆုံး incadrandu- ကြောင်း client ကိုထုတ်ကုန်များအတွက်ညာဘက်ဘတ်ဂျက် သူတို့ကိုရလဒ်အတိအကျ 3D စီမံကိန်းတွင်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်စီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းပြီးတော့ကျနော်တို့က client ကိုပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများသုံး packages များထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်အထောက်အပံ့စီမံကိန်းဒီဇိုင်း၏အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုဆက်ကပ်။
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှု Nobili Pro ကို (3D ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အယူအဆ, မြေပုံဒီဇိုင်း, ပစ္စည်းများတင်ဒါ)
- အိမ်များ, ခေတ်သစ် Villas စျေးနှုန်းများ 14-19 ယူရို / စတုရမ်းမီတာ, partition ကို၏ဧရိယာများနှင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ။
- အိမ်များ, partition ကို၏ဧရိယာများနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဂန္စျေးနှုန်း-16 22 ယူရို / စတုရမ်းမီတာ cottages ။
- မျက်နှာပြင်နှင့်ရွေးချယ်စတိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ခန်း, စတူဒီယိုစျေးနှုန်းများ 20-30 ယူရို / စတုရမ်းမီတာ။
လျှပ်စစ်နှင့်သန့်ရှင်းတပ်ဆင်နှင့်အတူစီမံကိန်းနှင့်အာကာသ optimization, 3D ဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂဒီဇိုင်း, အစစ်လားထင်ရတဲ့ပုံများ, မြေပုံဒီဇိုင်း (ပုံကြမ်း 2D, မျက်နှာကျက် created ပရိဘောဂ creat- စကေးရေးဆွဲအတူရေးဆွဲ 3D, repartitioning, etc သူတို့ကပစ္စည်းများအတွက်စျေးနှုန်း ) သင်တိုက်ရိုက်ပေးစီမံကိန်းကိုပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုပါ။
ပရီမီယံအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ (turnkey) - စျေးနှုန်းများ ဝယ်လိုအားအပေါ်
လျှပ်စစ်နှင့်သန့်ရှင်းတပ်ဆင်နှင့်အတူစီမံကိန်းနှင့်အာကာသ optimization, 3D ဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂဒီဇိုင်း, အစစ်လားထင်ရတဲ့ပုံများ, မြေပုံဒီဇိုင်း (ပုံကြမ်း 2D, မျက်နှာကျက် created ပရိဘောဂ creat- စကေးရေးဆွဲအတူရေးဆွဲ 3D, repartitioning, etc ပစ္စည်းများ Ofeta စျေးနှုန်းသငျသညျ ) သင်တိုက်ရိုက်ပေးစီမံကိန်းကိုပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုပါ။
အဆောက်အဦးများနှင့်အတွင်းပိုင်းများအတွက်စာချုပ်များစီစဉျ (စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခြေလှမ်းများအလုပ်စစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်, အလုပ်မလုပ်) site ပေါ်တွင်အလုပ်ကူညီခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းဖို့ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီဇိုင်းကိုအခိုငျအမာပြီးသားလည်းမရှိလျှင်။
အီတလီနိုင်ငံကနေပရိဘောဂ၏ collection များကိုစီစဉျ, ပရိဘောဂများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် installation ကိုခြေရာခံအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
စီမံကိန်းအတွက်ဆက်ပြောသည်အားလုံးပစ္စည်းများပို့ဆောင်မှုနှင့်စိုက်ထူ -Following ။
စာပို့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း BY DESIGN SERVICE ကို
- စျေးနှုန်းများအိမ်များများအတွက် 14-19 ယူရို / စတုရမ်းမီတာ, ခေတ်သစ် Villas ။
- အိမ်များဂန္ထဝင် Villas များအတွက်စျေးနှုန်းများ 16-22 ယူရိုစတုရမ်းမီတာ။
- တိုက်ခန်းများများအတွက်စျေးနှုန်းများ 22-35 ယူရို / စတုရမ်းမီတာ,.
site ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော e-mail, အတွင်းပိုင်းကနေအဆောက်အဦး drawings နဲ့ဓါတ်ပုံတွေပို့ပေးသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစျေးနှုန်း၏လက်ခံမှု -After ဖြည့်ပါနှင့်မေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇယားလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်စတိုင်နှင့်သင်လိုချင်သောအတိအကျဘာဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုများစွာသောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို decorating တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်း၏ဦးတည်ရာကိုနှင့် ပတ်သက်. ဒီ data တောင်းဆိုမှုကိုသတင်းအချက်အလက်, ။
ဖွစျပွီး (ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသော) 3D ၌သင်တို့၏အာကာသဖန်တီးနှငျ့သငျ partition ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဝန်ခံရန်အဘို့အကျနော်တို့ထို့နောက်အစီအစဉ် 3D အာကာသအတွင်းအလုပ်လုပ်မည်, မေးလ် 3D ရေးဆွဲပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ထိတွေ့ထားခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့နှင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရန်။
-When စီမံကိန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်, သငျသညျစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့အလိုရှိသမျှကိုဒေတာများစီမံကိန်းကို folder ကိုလက်ခံရရှိရန်ဆက်သားအားဖြင့်အထုပ်ကိုလကျခံပြီးနောက် (ပုံကြမ်းလျှပ်စစ်နှင့်သန့်ရှင်းတပ်ဆင်, ရေးဆွဲအတူ 3D, ထို့နောက် mail ကိုပထမအဆင့် 2D ရေးဆွဲအတွက်လက်ခံရရှိပြီးပါလိမ့်မယ် 3D ပရိဘောဂ creat- စကေးရေးဆွဲအတူငါတို့သည်သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပေးစီမံကိန်းပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအဘို့အ ofeta စျေးနှုန်း) မျက်နှာကျက်, repartitioning, etc ဖန်တီးခဲ့သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မလိုအပ်ပါဘူးအဆိုပြုထားစီမံကိန်းကိုဆောင်ကြဉ်းချင်ပါတယ်ဆိုအပြောင်းအလဲများကို။ ကျနော်တို့ထိတွေ့ထားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးရလဒ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်သင်စီမံကိန်းကို 3D များတွင်အသုံးပြုဖူးတဲ့ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်မညျဖွစျကွောငျးကုမ္ပဏီဖှံ့ဖွိုးတိုးတထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏စေတနာအားဖြင့်အတိအကျစီမံကိန်း 3D ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်သို့မှသာစီမံကိန်းဒီဇိုင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့၏အယူအဆမှတင်သွင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုရန်မပိုကုန်ကျစရိတ်မှာသင့်တည်နေရာပြောင်းရွှေ့သင်ရွေးချယ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို (အိမ်, villa, တိုက်ခန်း, ဟိုတယ်, စားသောက်ဆိုင်, ဘား, ဆိုင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း, အလှပြင်ဆိုင်ဆံပင်ညှပ်သမား) ၏ဘာပဲအမျိုးအစား အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း 3d ။ နိဂုံးချုပ်, သင် Cluj နာပိုကာမွို့၌ရှိကြ၏ဖြစ်စေ, Timisoara, Oradea, အာရဒ်, Sibiu နှင့် Hunedoara ဘူခါရက်, Constanta, Giurgiu, Calarasi, ဂလာတိ, Tulcea, Craiova, Brasov နှင့် Prahova အတွက်ဖောက်သည်တစ်ဦးအဖြစ်စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအတွက်တူညီတဲ့စျေးနှုန်းပေးချေမည် ။ ဆက်ဆံရေးကိုဖုန်း: 0720.665.365
န်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ဗိသုကာပြန်ဆို 3d, အတွင်းပိုင်း, အိမ်များ 17 ယူရိုမီတာကနေဂန္, ခေတ်သစ်, ဈေးနှုန်းများ (အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများအတွက်နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုစျေးနှုန်းအဘယ်သူမျှမတည်ဆောက်စတုရန်းမီတာအရေအတွက်အတိုင်းတွက်ချက်သည်။ ခန်း၏ Constanta, ဘူခါရက်, Ploiesti, Brasov, Pitesti, ဂလာတိအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုအောက်မှာစီမံကိန်းစတိုင်ရွေးချယ်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေး) ။
Category: ဆောင်းပါးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ, ရုံး, အိမ်, ဂန္, ခေတ်သစ်, အိမ်တွင်းဂန္အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ, စားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်, ကဖေး, ဟိုတယ်များ, နေထိုင်ရန်အဆောင်များ, စျေးဆိုင်, မြင့်မြတ်သောအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ, ဒီဇိုင်း, ဗိသုကာ 3d , ဘူခါရက်, Constanta, Brasov, pitesti, Ploiesti, ဂလာတိ, Cluj, Timisoara, ဗိသုကာ, အတွင်းပိုင်းဗိသုကာစဉ်ဆက်မပြတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်နာများအိမ်များ ဗိသုကာ စဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်း။
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်း - ဗိသုကာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာဘူခါရက် - Constanta အိမ်များပြည်ထဲရေး
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပရောဂျက်၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်သောကြောင့်, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတစ်ခုကုမ္ပဏီတခု၏ရုံးများကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစတိုင်များကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးအချို့ဝိသေသအင်္ဂါရပ်များရှိသည်, အသီးအသီးဖောက်သည်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဒါမှမဟုတ်အိမ်, တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်သူ၏ villa decorating အတွက်၎င်း၏အမှတ်အသားလုပ်လိုသည်။ ဒါကြောင့်အရိယာပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစီးပွားဖြစ် (စားသောက်ဆိုင်, ဘား, ဟိုတယ်, အဝတ်ဆိုင်, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအလှပြင်ဆိုင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း) သို့မဟုတ် Rezindential (အိမ်များ, တိုက်ခန်းများ) ပစ်မှတ်ထားဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ရိုမေးနီးယားနှင့်ဘူခါရက်, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, ဂလာတိ, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava ၏ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာကြီးတွေအကောင်အထည်ဖော်ဗိသုကာ၏ 2008 စီမံကိန်းများကိုကျော် 250 ကတည်းကများနှင့်အတူစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခြင်း , Focsani, Vaslui, မြင့်မြတ်သောအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း key ကိုဖြေရှင်းချက်အပေါင်းတို့နှင့်စီမံကိန်းများထူးခြားတဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆိုတင်သွင်း။ သင်တစ်ဦးကိုရှေးခယျြအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစတိုင်၏ဝိသေသ element တွေကိုထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးဗိသုကာနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဦးစားပေးကိုယ်စားပြုစီစဉ်ချင်သောအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ် villa တစ်ခုချင်းစီအာကာသ။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတစ်ဦးကဂန္စတိုင်သစ်သားအီတလီနိုင်ငံလုပ်ပရိဘောဂ, တစ်ဦးသစ်သားအခင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ချောအဖြစ် chromatic ပွင့်လင်းဥရောပမှာထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း၏အကွာအဝေးကိုရှေးခယျြလိုအပ်သည်။ အလင်းရောင်ထိုကဲ့သို့သော chandelier အဖြစ်ပြား, ဒါမှမဟုတ်ပင်အချို့အလှဆင် cornices နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်ရှေ့တန်းမှမှအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏ဂန္စတိုင်၏သနျ့ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပစ္စည်းများပြီးသွားအရည်အသွေးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်းကို၏ဤအမျိုးအစားသက်တမ်းအာမခံပါသည်။ သင်တန်း၏, တိုင်းရွေးချယ်မှုဘဏ္ဍာရေး client ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်သူ၏အရသာပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မီအတူတကွဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်နာ Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းနှင့်တကွ, ဖောက်သည်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို 3D format ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သွားလာရင်း-ရှေ့ဆက်ပေးထားပြီးတာနဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကမေးခွန်းတစ်ခုကို၎င်း၏ဖောက်သည်တစ်လျှောက်လုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအတွက်ဤစီမံကိန်းအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုမြဲမြံစွာသင်တစ်ဦးအိမ်, တိုက်ခန်း, ဟိုတယ်, စားသောက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်သို့မဟုတ်အလှပြင်ဆိုင်စီစဉ်ချင်သမျှအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုအလုပ်လုပ်တဲ့အာကာသကစားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်အတွက်ဗိသုကာ။ Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းအဘယ်သူ၏အထူးပြုန်ဆောင်မှုနှိုငျးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပါရမီအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို e-mail, (nobilidesign [@] gmail.com) Send ပုံကြမ်းသင်သည်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြသချင်သောပုံကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်စကားများ 2d ။ ကုန်ကျစရိတ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများစျေးနှုန်းပြည်ထဲရေး VAT မပါဘဲဂန္စတိုင်အိမ်များ 16-22 စျေးနှုန်းယူရိုမီတာဒီဇိုင်း။ အဆိုပါ 15 19 ယူရိုကနေစျေးနှုန်းပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းခေတ်သစ်နေအိမ်များ VAT မပါဘဲ့။ ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းလက်လီစျေးနှုန်းများ 14 - 25 ယူရို VAT မပါဘဲ့။ တစ်ဦးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်း၏စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းခန်း, ရှုပ်ထွေးနှင့်စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်ရဲ့ style ကိုရှေးခယျြ partition ကိုနဲ့နံပါတ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ Gabriela Nechifor ဗိသုကာပညာရှင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်ရူပါရုံကိုအထူးကုပေါ်မူတည်သည်။ ဗိသုကာပါဝင်သည်ဟုအထူးကုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအသီးအသီးစီမံကိန်းကိုနောက်ကွယ်မှတည်ရှိသောအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ, အပြင်ပန်း, ဒီဇိုင်နာပရိဘောဂမသက်ဆိုင်သင်တို့နေရာမြို့၏, အိမ်, တိုက်ခန်းသို့မဟုတ် villa ၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းများ 3D အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုကို set up ခံရဖို့အခန်းနံပါတ်နှင့်သင်တန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှု, အခန်းပေါင်း၏ဧရိယာပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြား, 17 ယူရို / စတုရမ်းမီတာမှာစတင်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အသီးအသီးစတိုင်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အကြံပေးချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။